१० वर्षपछि होला स्ववियु निर्वाचन ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
१० वर्षपछि होला स्ववियु निर्वाचन ?
निर्वाचन होला भन्नेमा अझै आंशका
प्रकाशित मिति २४ पुष २०७५, मंगलवार ११:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको तयारीको सुरुआत गरेको छ । त्रिविले फागुनमा गर्ने भनेर तयारी थाल्दा विगतको १० वर्षदेखि हुन नसकेको निर्वाचन होला भन्नेमा अझै आंशका उब्जाएको छ ।
प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा हुने त्रिविका क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन विगत ०६५ सालयता हुन सकेको छैन । तर, त्रिविले यसवर्ष भने जसरी नि स्ववियु निर्वाचन गराउने पक्षमा देखिएको छ ।
त्रिविले आगामी फागुन महिनामा स्ववियु निर्वाचन जसरी पनि गर्न अहिल्यै नै तयारीका लागि देशभरिका सवै आंगिक र सामुदायिक क्याम्पसलाई समेत परिपत्र पठाउदै निर्देशन दिइसकेको त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक गंगाबहादुर थापाले जानकारी गराए ।
उनले २०७३ फागुन १८ गते केही क्याम्पसमा भएको स्ववियु निर्वाचनबाट निर्वाचित एवं सदस्यहरूको दुई वर्षे कार्यकाल समाप्त हुने भएको हुँदा ०७५ फागुन महिनामा हुने स्ववियु निर्वाचनको पूर्वतयारी गर्न निर्देशन दिएको बताए ।
‘यसपटकका निर्वाचनमा सबै विद्यार्थी सँगठनलाई समेटी देशभरका सबै क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन गर्ने छौँ’ उनले भने, ‘निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि र निर्वाचनको कार्यतालिका निकाल्नुभन्दा अघि विद्यार्थी सँगठनसँग छलफल गर्ने छौँ ।’
त्रिविले पटक–पटक निर्वाचन गर्न खोजे पनि विद्यार्थी सँगठनको कारणले हुन सकेको छैन । विसं ०६७ देखि अहिलेसम्म त्रिविले पाँच पटकभन्दा बढी पटक मिति घोषणा गरे पनि त्यो सम्भव भएको छैन ।
विद्यार्थी सँगठनको कारणले त्रिविले स्ववियु निर्वाचन गर्न सकेको छैन । कहिले अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, कहिले अनेरास्ववियु र कहिले नेपाल विद्यार्थी संघको कारणले त्रिविमा निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि हुन सकेको छैन । ०७३ सालबाट पहिलोपटक २८ वर्षे उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन भएको थियो ।
तर, उक्त वर्ष भएको निर्वाचनमा १ हजार ८३ क्याम्पसमध्ये १ सय ६ क्याम्पसमा मात्र निर्वाचन भएको थियो । जसमा ६० मध्ये २६ वटा आंगिक क्याम्पस र ८० वटा सामुदायिक क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन भएको थियो । त्यतिवेला काठमाडांै आरआर र पब्लिक युथ क्याम्पसमा मात्र निर्वाचन भएको थियो ।
त्यसअघि ०६९ सालमा गर्ने भनिएको निर्वाचन अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो । अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीबीच विद्यार्थी भर्ना पक्रियामा असहमति हुदा निर्वाचन अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो । त्यतिवेला आरआर क्याम्पस, केन्द्रीय क्याम्पस किर्तीपुर क्याम्पसमा फर्जी विद्यार्थी भर्ना विवादले निर्वाचन रोकिएको थियो ।
त्यसपछि पनि त्रिविले निर्वाचन गराउन पटक पटक प्रयास गर्दा पनि विद्यार्थी सँगठनका कारणले हुन सकेका छैन । कहिले भर्ना विवाद त कहिले निर्वाचन प्रणाली त कहिले उमेर हदबन्दीका कारण निर्वाचन हुन नसकेको हो ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को वैठकले चाडै नै स्ववियु निर्वाचनको मिति तोकिने उनले जानकारी गराए । उनले अघिल्लोपटक विभिन्न कारण स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकेका क्याम्पसहरूमा समेत यस वर्ष विद्यार्थी संघ सँगठनहरूको सहमतिमा निर्वाचन गर्ने बताए ।
अघिल्लो निर्वाचनमा पहिलोपटक उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो ।
तर उमेर हदबन्दीमा नेपाल विद्यार्थी संघको असन्तुष्टि समूहले विरोध जनाउँदा निर्वाचन हुन सकेन । उक्त नेविसंघको समूहले उमेर हदबन्दी हटाउन माग गर्दै सबै क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेका थिए जसले गर्दा स्ववियु निर्वाचन हुन सकेन ।
नेविसंघले क्याम्पसमा धेरै समयदेखि क्रियाीशल विद्यार्थी नेतालाई एकपटक स्ववियुमा लैजानका लागि उमेर हदबन्धी हटाउन माग गरेको थियो ।
२८ वर्ष उमेर हदबकन्दीमा धेरै विद्यार्थी नेता निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरेकोले उनीहरूले विरोध गरेका थिए । नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिह महरले उमेरहदबन्दीमा सहमति जनाए पनि कुन्दन काफ्ले समूहले विरोध गरेको थियो ।
अव २८ वर्षे उमेरहदबन्दी स्वीकार गर्ला
नेविसंघले आफ्नो आउँदो महाधिवेशनमा ३२ वर्षे उमेरहदबन्दी लगाउने भएको छ । अब उसले त्यही ३२ वर्षको उमेरहदबन्दीको आधारमा २८ वर्षलाई स्वीकार गर्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यता अध्यक्ष महरले २८ वर्षलाई दुई वर्ष अगाडि स्वीकार गरिएकोले त्यसलाई मान्ने बताए ।
अहिले अपनाइएको मिश्रित प्रणालिमा अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षसहित ५० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन र उपाध्यक्ष, सहसचिव र ५० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिमा निर्वाचन गर्दै आएको छ ।
विद्यार्थी संगठनद्वारा स्वागत
त्रिविले स्ववियु निर्वाचनको तयारी गरेको वेला विद्यार्थी सँगठनले स्वागत गरेका छन । अनेरास्ववियुका (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रञ्जित तामाङले स्ववियु निर्वाचन गर्ने त्रिविको तयारीलाई स्वागतयोग्य बताए ।
उनले २८ वर्षे उमेरहदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणालिमा आफ्नो सँगठन सहभागिता जनाई विद्यार्थीको ओझेल परेको एजेन्डालाई निर्वाचनमा लागिने बताए । उनले जसरी नै गर्नुपर्दछ भनेर अन्य सँगठनसँग पनि छलफल गरिने बताए ।
नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष महरले पनि निर्वाचनको प्रणालीबारे कुनै विवाद नभएकोले आफ्नो सँगठन अब हुने निर्वाचनमा सहभागी जनाउने बताए । उनले पहिले हुन नसकेका क्याम्पसमा पनि विद्यार्थी सँगठनसँग छलफल गरेर सम्पन्न गर्ने समेत जानकारी गराए । अनेरास्ववियुका महासचिव ऐन महरले स्ववियु निर्वाचनबारे विद्यार्थी सँगठनमा कुनै विवाद नरहेकोले त्रिविलाई निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन गर्न सहयोग गर्ने बताए ।
पुरुषद्वारा सम्बन्धविच्छेद गर्नेक्रम बढ्दै
लमजुङ । नयाँ मुलुकी संहिता कार्यान्वयनसँगै २०७६ वैशाख २७ गतेसम्म जिल्ला अदालतमा १४५ जोडीले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गरेको जिल्ला…
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण रोक्न प्रदीप ज्ञवालीलाई सीआइएको निम्तो
पश्चिमा देशहरूले नेपाललार्इ इण्डियन आँखाले हेर्ने गरेको भन्ने भ्रम रहेको छ । नेपालमा। वास्तविकता के हो भने तिनीहरू…
मोदी नेपाल आउने तयारीसँगै भारतीय खुफिया एजेन्सी सक्रिय
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउने तयारी सुरू भएसँगै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ हावी भएको…
चार श्रीमतीका नाममा भ्रष्टाचारको सम्पत्ति
काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सरकारी कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय…